जुँगाको तलब मासिक २५० !
As of Mon, 06 Jul, 2020 05:40
सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ कतै जुँगा पालेर पनि पैसा कमाइन्छ ? सबैको एउटै उत्तर हुनसक्छ पाइँदैन ।
तर जिल्लाका एक व्यक्ति भने विगत १२ वर्षदेखि जुँगा पालेर पैसा कमाउने गरेका छन् । सिस्ने गाउँपालिका–६ रुकुमकोट निवासी हाल घोराही उपमहानगरपालिका–१५ निवासी कालिबहादुर बुढाथोकीले जुँगा पालेवापत विगत १२ वर्षदेखि मासिक तलब बुभ्mदै आएका छन् ।
दाङको घोराहीमा रहेको वेस्टर्न डेभलप्मेन्ट बैंकमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत बुढाथोकीलाई तुलसीपुर निवासी जुद्ध एण्ड पूर्ण निर्माण सेवाका सञ्चालक पूर्ण भण्डारीले मासिक २५० रुपैयाँ दिँदै आएका छन् । “म पेशाले निर्माण व्यवसायी हुँ, कामको सिलसिलमा बैंकमा आइरहँदा कालीबहादुरले पालेको जंँुगा देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो,” भण्डारीले भने, “नागबेली आकारको उनको कालोजुँगा देखेपछि मैले खुशीले उनलाई प्रोत्साहन स्वरुप पैसा दिने निर्णय गरेको हँु ।” मासिक ५० रुपैयाँबाट दिन सुरु गरेका भण्डारीले पछिल्लो समय मासिक २५० रुपैयाँ बुढाथोकीलाई दिने गरेका छन् ।
२०६२ सालदेखि आफूले नियमित रूपमा जुँंगा पालेवापत रकम प्राप्त गर्दै आएको बुढाथोकीले बताए । “सुरुमा ५० रुपैयाँबाट मलाई पैसा दिन सुरु गर्नुभएको हो अहिले २५० रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ,” बुढाथोकीले भने । उनले जुगाँलाई मन पराइदिएर पैसा दिँदा आफूलाई खुशी लागेको समेत बताए । जुंगा पालेर प्राप्त गरेको पैसा जुगा संरक्षणमा नै खर्च गर्ने गरेको समेत उनले बताए ।
बुढाथोकी अवकाश प्राप्त नेपाली सेना हुन् । उनले नेपाली सेनाको दुर्गा भञ्जन गुल्ममा कार्यरत रहँदा २०५७ सालतिर पनि मासिक एक सय रुपैयाँ जुगाको तलब खाने गरेको बताए । “म नेपाली सेनामा हवल्दार हँुदा मलाई मेरो गुल्मका क्याप्टेन समिर रानाले मासिक एक सय रुपैयाँ जुँगा पालेवापत पैसा दिने गरेका थिए,” बुढाथोकीले भने, “करिब ६ महिना पैसा पाएँ, त्यसपछि म अवकाश भएर घरमा आएपछि उनीसँग भेट भएन ।” अहिले बैंकको सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका बुढाथोकीलाई निर्माण व्यवसायी भण्डारीले आपूm बाँच्दासम्म प्रत्येक वर्ष थोरै भए पनि वृद्धि गर्दै जुगाको लागि पैसा दिइरहने बताएका छन् ।